၂၀၁၉ ခုနှစ်ကစပြီး ပြည်နယ်တိုင်း ဘောလုံးပွဲတွေ ရန်ကုန်မှာ ပြန်ကျင်းပမယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကစပြီး ပြည်နယ်တိုင်း ဘောလုံးပွဲတွေ ရန်ကုန်မှာ ပြန်ကျင်းပမယ်
၂၀၁၉ ခုနှစ်ကစပြီး ပြည်နယ်တိုင်း ဘောလုံးပွဲတွေ ရန်ကုန်မှာ ပြန်ကျင်းပမယ်
ပြည်နယ်တိုင်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲများကို လာမယ့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကစပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ ပြန်လည် ကျင်းပ ပြုလုပ်သွားဖို့ စီစဉ်လုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမြင့်ထွေးက ပြောပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက် ဒီနေ့ စတင်ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှာ သင်္ဃန်းကျွန်း မဲဆန္ဒနယ်က ဦးရွှေလှ(ခ) ဦးရွှေလှဝင်းက တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ ပြည်နယ်ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများကို ရန်ကုန်မြို့မှာ နှစ်စဉ်ပြန်လည် ကျင်းပရန် အစီအစဉ်ရှိ၊ မရှိ မေးခွန်းကို ဖြေရင်း ၀န်ကြီးက ပြောခဲ့တာပါ။
အောင်ဆန်းကွင်းအပါအ၀င် ရန်ကုန်မြို့က ဘောလုံးကွင်းတွေ ယိုယွင်းပျက်စီးနေပြီး အဲဒီ ကွင်းတွေ ပြင်ဆင်ဖို့ အစိုးရထံ ၂၀၁၈-၁၈ ဘဏာနှစ်မှာ ဘတ်ဂျက်တင်တောင်းမှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ၀န်ကြီးက ပြောပါတယ်။
…………………. ။ ။ ………………….
၀၁၉ ခုနှဈကစပွီး ပွညျနယျတိုငျးဘောလုံးပှဲတှေ ရနျကုနျမှာ ပွနျကငျြးပမယျ
ပွညျနယျတိုငျးဘောလုံးပွိုငျပှဲမြားကို လာမယျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈကစပွီး ရနျကုနျမွို့မှာ ပွနျလညျ ကငျြးပ ပွုလုပျသှားဖို့ စီစဉျလုပျဆောငျနတေယျလို့ ကနျြးမာရေးနှငျ့အားကစားဝနျကွီးဌာန ပွညျထောငျစု ဝနျကွီး ဒေါကျတာမွငျ့ထှေးက ပွောပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၁၇ ရကျ ဒီနေ့ စတငျကငျြးပပွုလုပျတဲ့ ပွညျသူ့လှတျတျောမှာ သင်ျဃနျးကြှနျး မဲဆန်ဒနယျက ဦးရှလှေ(ခ) ဦးရှလှေဝငျးက တိုငျးဒသေကွီးနဲ့ ပွညျနယျဘောလုံးပွိုငျပှဲမြားကို ရနျကုနျမွို့မှာ နှဈစဉျပွနျလညျ ကငျြးပရနျ အစီအစဉျရှိ၊ မရှိ မေးခှနျးကို ဖွရေငျး ဝနျကွီးက ပွောခဲ့တာပါ။
အောငျဆနျးကှငျးအပါအဝငျ ရနျကုနျမွို့က ဘောလုံးကှငျးတှေ ယိုယှငျးပကျြစီးနပွေီး အဲဒီ ကှငျးတှေ ပွငျဆငျဖို့ အစိုးရထံ ၂၀၁၈-၁၈ ဘဏာနှဈမှာ ဘတျဂကျြတငျတောငျးမှာ ဖွဈတယျလို့လညျး ဝနျကွီးက ပွောပါတယျ။
Previous articleရခိုင်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံတကာက အရေးယူခဲ့ရင် စီးပွားရေးမှာ အခက်အခဲ ရှိလာနိုင်(ရုပ်/သံ)
Next articleမြန်မာမှာ ဆင်းရဲမှုမျဉ်းအောက် နေထိုင်သူ ၂၅ ဒသမ ၆ ရာခိုင်နှုန်း ခန့်ရှိ